नेपाल बैङ्कले नेपाल इन्स्योरेन्समा रहेको शेयर विक्री गर्ने
वैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल बैङ्कले नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा रहेको संस्थापक शेयर बोलकबोल प्रक्रियाबाट विक्री गर्ने भएको छ । बैङ्कले न्यूनतम रू.४ सयमा इन्स्योरेन्समा रहेको १० लाख ३१ हजार ६ सय ७४ कित्ता शेयर विक्री गर्न लागेको हो । विक्री प्रबन्धकका रूपमा बैङ्कले श्री सिद्धार्थ क्यापिटललाई नियुक्त गरेको छ ।
शेयरका लागि बोलकबोल गर्दा न्यूनतम १ सय कित्ता वा सोभन्दा माथि अधिकतम कम्पनीको चुक्ता पूँजीको १५ प्रतिशत अर्थात् ४ लाख ३१ हजार ४ सय १० कित्ताका लागि आवेदन दिन सकिनेछ । विद्यमान शेयरधनीले आवेदन दिँदा यस बोलकबोलमार्फत खरीद गरिने शेयरसमेत गरी उक्त सीमा ननाघ्ने कुरा यकिन गरी आवेदन दिनुपर्नेछ । रू. १० लाखसम्मको आवेदन दिनेले स्वैच्छिक रूपमा र रू. १० लाखभन्दा बढी रकमको आवेदन दिनेले अनिवार्य रूपमा आफ्नो प्यान नं आवेदनमा फारममा उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
शेयरको न्यूनतम मूल्य प्रतिशेयर रू. ४ सय तोकिएको हुँदा उक्त मूल्यभन्दा कम मूल्य अङ्कित गरी पेश गरेको आवेदनकलाई बोलकबोल मूल्याङ्कनमा समावेश नगरिने बैङ्कले बताएको छ ।
बैङ्कले विक्री गर्न लागेको शेयरबाट न्यूनतम रू. ४१ करोड आम्दानी गर्न सक्नेछ । बजारमा मूल्यमा कम्पनीको शेयर विक्री भएमा इन्स्योरेन्सबाट कम्पनीले रू. ७५ करोडभन्दा बढी प्राप्त गर्न सक्नेछ । दोस्रो बजारमा नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीको शेयर रू. ७ सय ५० मा कारोबार भइरहेको छ । बैङ्कले विक्री गर्न लागेको उक्त शेयर नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीको चुक्ता पूँजीको करीब ४० प्रतिशत हो ।
उक्त शेयर विक्रीपछि पनि कम्पनीको बैङ्कको १० प्रतिशत शेयर बाँकी रहनेछ । इन्स्योरेन्सको शेयरका लागि २१ दिनको समय दिइएको छ । आगामी जेठ ४ गते मङ्गलवार ३ बजेसम्म सिद्धार्थ क्यापिटलको कार्यालयमा निवेदन दिइसक्नुपर्नेछ । बैङ्कले इन्स्योरेन्सलगायत अन्य कम्पनी राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, नागरिक लगानी कोष तथा होटल ह्यातको समेत शेयर विक्री गर्ने भएको छ ।